Fahasamihafana eo amin'ny hery manerantany sy ny hery andriamby | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny hery manerantany sy ny hery andriamby | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / Simia ara-batana / fahasamihafana misy eo amin'ny hery manerantany sy ny hery manasitranana
Fahasamihafana eo amin'ny hery manerantany sy ny hery manetrika
9 Aogositra 2020 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny hery misintona sy ny hery andriamby dia ny hery misintona dia miasa amin'ireo zavatra rehetra misy faobe kosa ny hery manerantany dia mihetsika amin'ireo zavatra misy vy na fiampangana herinaratra aminy.
Ny hery misintona sy ny hery manerantany dia mamaritra ny fisarihana ny zavatra roa noho ny antony samihafa. Misy fahasamihafana maromaro eo amin'ireo karazana hery roa ireo.
2. Inona no atao hoe Hery Gravitational
3. Inona no atao hoe Hery Magnetika?
4. Fampitahana mifanila - Herin'ny hery misimisy vs hery manetrika amin'ny endrika takelaka
Inona no atao hoe Hery Gravitational?
Ny hery manintona dia ny hery miasa amin'ny zavatra iray noho ny hery misintona . Ny hery misintona na ny gravitation dia fizotra voajanahary izay misy ny zavatra rehetra amin'ny masira na amin'ny angovo ; ohatra, planeta, kintana, vahindanitra ary jiro. Ny hery matanjaka dia hery malemy indrindra amin'ireo fifandraisana efatra lehibe amin'ny fizika (ny hery telo hafa dia ny fifandraisana matanjaka, ny herinaratra elektromagnetika ary ny fifandraisana malemy). Noho izany, ny hery misintona dia tsy misy fitaomana lehibe amin'ny haavon'ny poti-subatomika. Na izany aza, io no hery ifandraisan'ny macroscopic, izay miteraka ny famoronana, ny endrika ary ny lalan'ny vatana astronomia.
Azontsika atao ny mamaritra ny hery misintona ho toy ny hery manintona izay zavatra roa manana massa iray manokana. Antsoinay hoe hery manintona izy io satria mahatonga hatrany ny roa tonta hiangona ary tsy hanosika azy ireo velively. Ny lalànan'ny gravitation manerantany nataon'i Newton dia manambara fa ny zavatra rehetra misy hazavana dia misintona zavatra hafa rehetra eo amin'izao rehetra izao. Saingy, miankina amin'ny habetsaky ny zavatra io hery manintona io; oh: vahoaka marobe mampiseho fisarihana lehibe. Toy izao manaraka izao ny fampitahana gravitation universal:
Aiza ny hery misintona F, ny G no tsy miova gravitational, ny M ny haben'ny zavatra iray, ny M ny volan'ny zavatra iray hafa, ary ny r kosa ny elanelana misy eo amin'ny zavatra roa.
Inona no atao hoe Hery Magnetika?
Ny hery magnetika dia hery manintona izay mitranga eo anelanelan'ny sombin-javatra roa misy vy na zavatra misy vy. Izy io dia mety ho fanintona na fanilikilihana mifototra amin'ny fiampangana ionic amin'ilay zavatra; mifamadika ny zavatra miaraka amina herinaratra mitovy nefa mifanintona kosa ny fiampangana mifanohitra.
Ity hery manerantany ity dia ny hery ifotony izay tompon'andraikitra amin'ny hetsiky ny motera elektrika sy ny fanintona eo anelanelan'ny andriamby. Ireto ny fampitahana ny herin'ny andriamby:
Aiza ny hery F ny andriamby, ny q no fiampangana ary ny v no hafainganan'ny zinga, ary ny B ny haben'ny sahan'andriamby. Eto isika dia afaka mamaritra ny hery manerantany eo anelanelan'ny sombin-javatra mihetsiketsika roa toy ny fiatraikany amin'ny fiampangana na ny sahan'andriamby izay noforonin'ilay sombin-kafatra hafa voampanga.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hery manerantany sy ny herin'ny andriamby?
Ny hery misintona sy ny hery manerantany dia mamaritra ny fisarihana ny zavatra roa noho ny antony samihafa. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny hery misintona sy ny hery andriamby dia ny hery misintona dia mihetsika amin'ny zavatra rehetra izay manana faobe kosa ny hery manerantany dia mihetsika amin'ireo zavatra misy vy na fiampangana herinaratra aminy.
Ankoatr'izay, ny hery misintona dia matetika hery malemy raha ny hery manerantany kosa dia hery matanjaka be kokoa. Ohatra, ny hery misintona eto an-tany izay manampy antsika mandeha amin'ny velaran'ny tany dia ny hery misintona. Ohatra iray amin'ny fampiharana ny hery manerantany dia ny fihetsiky ny motera elektrika.
Ity ambany ity ny infographic dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny hery misintona sy ny hery manerantany.
Famintinana - Herin'ny hery misintona vs hery andriamby
Ny hery misintona sy ny hery manerantany dia mamaritra ny fisarihana ny zavatra roa noho ny antony samihafa. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny hery misintona sy ny hery andriamby dia ny hery misintona dia miasa amin'ireo zavatra rehetra misy faobe kosa ny hery manerantany dia mihetsika amin'ireo zavatra misy vy na fiampangana herinaratra amin'izy ireo.
1. “Herin'ny hery misintona.” Lohahevitra momba ny siansa mivantana, misy eto .
2. “Force andriamby.” Physika hyper, Azo zahana eto .
1. “Magnets silindrika VFPt manintona” Nosoratan'i Geek3 - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana misy amin'ny tsiranoka azo tsentsina sy tsy azo tsindriana Fahasamihafana eo amin'ny fanehoan-kevitra momba ny Photochemical sy Thermal Fahasamihafana eo amin'ny fiarovana Anodika sy katolika Fahasamihafana eo amin'ny fanehoan-kevitra momba ny isa sy ny lalàna momba ny isa Fahasamihafana eo amin'ny coalescence sy ny fihenan'ny Ostwald
Fahasamihafana eo amin'ny marbra hajaina sy voalamina
Fahasamihafana eo amin'ny fanangonana Generic sy Non-Generic ao amin'ny C #
Fahasamihafana eo amin'ny Chromosome Homologous sy ny Rahavavy Chromatids
Fahasamihafana eo amin'ny CLIA sy ECLIA
Fahasamihafana eo amin'ny aretina Huntington sy ny Alzheimer